Saịtị cha cha Malay Online | Koodu ego cha cha n'ịntanetị
(546 votes, nkezi: 5.00 si 5)
Loading ...Ọtụtụ ụdị ịgba chaa chaa bụ iwu na Malaysia, mana maka ebumnuche metụtara okpukpe, anaghị anabata ndị Alakụba mpaghara itinye aka na ụdị ntụrụndụ dị otú ahụ. Na Malaysia, enwere egwuregwu cha cha, igwe egwuregwu na lọtrị. Ewezuga ịgba ịnyịnya, amachibidoro ụdị ịgba egwu egwuregwu niile. Na 2010, a nwara iji weghachite ịkụ nzọ egwuregwu, mana ọ bụ naanị ikikere enyere ka emebiri ngwa ngwa.
Na Malaysia, ọ bụ naanị otu cha cha Genting (Genting). Ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ na-elekarị anya. Anyị rịbara ama na ndekọ ndekọ ịgba chaa chaa n'ịntanetị anyị bụ naanị ebe na mba ebe ndị Malays nwere ike ịme egwuregwu bọọdụ na egwuregwu kaadị. Andị nhazi dị otu a ebutela nsogbu maka ọrụ ịgba chaa chaa nzuzo na ịkụ nzọ egwuregwu, nke na-alụ ọgụ mgbe niile na gọọmentị Malaysia.
Na mbu, ya na cha cha, na Malaysia enwere igwe oghere na egwuregwu kọmputa, dika igba elektrọnik. Ka o sina dị, n’afọ 2000, mkpebi gọọmentị emechiala obere ụlọ nzukọ ịgba chaa chaa ndị a n’ihi na ha nwere mmetụta na-adịghị mma n’ọgbọ na-eto eto nke mba ahụ.
Iwu ịgba chaa chaa n'ịntanetị na Malaysia na-egbochi ụdị ịgba chaa chaa a. Gọọmentị anaghị enye ikike maka imeghe casinos na mba ahụ ma were usoro kwesịrị ekwesị iji hụ na ndị egwuregwu Malaysia enweghị ike iji ụzọ mbata mba ọzọ. Enwere ike ijide ndị nwe ụlọ kọfị ịta ụta na mkpebi nke ndị ahịa ya nwere ike ịnweta saịtị cha cha n'ịntanetị.
Mgbe ị na-eji saịtị ịkụ nzọ dị n'ịntanetị n'èzí na egwuregwu, ndị egwuregwu Malaysia na-ahọrọ iji ọrụ nke ndị na-ede akwụkwọ, ndị nwere ọfịs na Asia. Na mkpokọta, nhọrọ kachasị mma maka ndị egwuregwu mpaghara - iji zere ịntanetị cafe na saịtị Asia n'ịntanetị ịkụ nzọ egwuregwu.
Tụkwasị na nke ahụ, amachibidoro ụlọ akụ si na Malaysia nkwụnye ego na saịtị ịgba chaa chaa n'ịntanetị. Ka o sina dị, a naghị achịkwa iwu a, na ndị na-agba chaa chaa na Malaysia ndị chọrọ igwu na ịntanetị, bụ ụzọ iji gbochie iwu a. Ọzọkwa, ụfọdụ n'ime ndị na-ahụ maka mba ụwa kachasị ukwuu na-enyekwa ọrụ ha n'asụsụ Malay.
Hụ ndepụta nke saịtị ntanetị n'ịntanetị nke na-anabata ndị egwuregwu si Malaysia, ma na-enye egwuregwu dị elu ma dị mma. N'ebe a, ị ga-ahụ ọtụtụ ihe ntụrụndụ sitere na igwe oghere na egwuregwu cha cha na-ebi site na ndị na-ere sọftụwia a ma ama dịka NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, na ọtụtụ ndị ọzọ. I nwekwara ike gụọ nyocha anyị nke saịtị cha cha n'ịntanetị, ka ị mara maka nkwalite dị n'ịntanetị kachasị mma, ego na nhọrọ ịkwụ ụgwọ maka ndị egwuregwu si Malaysia.
Gba chaa chaa na obodo Asia - Singapore
Obodo-obodo Singapore nwere nke abụọ kachasị elu n'ime mmadụ iri kacha elu na njiri mara ọrụ ndị njem. Ndị mmadụ na-abịa ebe niile site na ụwa iji mara ịdị ukwuu nke omenaala Eshia wee nwalee ọdịmma gị. Ebe izuike ma kpọọ na gị ụtọ? Kedu ihe ị ga-ahụ? CasinoTopLists na-agwa gị gbasara ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa na mba a na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Singapore - ntakịrị ntakịrị ọdịdị ala na akụkọ ihe mere eme;
A na-amachibido casinos n'ịntanetị na Singapore - amachibidoro, igbochi, ndị egwuregwu nwere ike ịnweta ntaramahụhụ ma ọ bụ ntaramahụhụ nke ọnwa 6;
Singapore - mba agwaetiti (agwaetiti 63 na mpaghara gbasaa site na nrụpụta aka), nke dị n'akụkụ agwaetiti Malaysia na Indonesia. Oge izizi ka akpọpụtara obodo a n’akụkọ nke narị afọ nke atọ. Na 15-16 narị afọ mba ahụ bụ akụkụ nke Sultanate nke Johor, ma mesịa ghọọ mpaghara nke Alaeze Ukwu Britain.
Ọzọkwa Singapore bụ akụkụ nke Malaysia. Na 1965, mba ahụ kwupụtara nnwere onwe ya, na afọ ndị na-adịbeghị anya kpamkpam ịdabere na steeti (ọbụlagodi ị ga-azụrụ mmiri ọ hadụ inụ na mba ndị agbata obi ya) na mba nke "ụwa nke atọ" abụrụla obodo mepere emepe nke ukwuu.
N’akụkọ ihe mere eme nke Singapore gọọmentị rụrụ ọrụ dị oke mkpa, Lee Kuan Yew (1959-1990), onye a mere ka obodo ahụ nwee ọganihu. Ugbu a, ọ bụ ọgbakọ omebe iwu nke nwere onye isi ala aha ya bụ Tony Tan.
Singapore - mba nwere oke oke akụ na ụba. Ha bi ebe a tumadi n'ihi na ndị na-etinye ego na ihu ọma "ihu igwe akụ na ụba" - obere ụtụ isi na ụlọ ọrụ transnational.
Ruo 2005 na mba a ruo afọ 40 ịgba chaa chaa bụ mmachibido iwu zuru oke, mana nsogbu akụ na ụba emeela onwe ya na mba a. N'oge a, Singapore abụrụla ebe egwuregwu abụọ kachasị na Macao, na-ahapụ ọbụna Las Vegas.
«Marina Bay Nye» - cha cha kasị ukwuu na Singapore
Nnukwu ihe owuwu nke ihe owuwu a bụ 3 55-storey elu nke 200 mita. N'elu ụlọ elu ndị a bụ ihe dị ka ụgbọ mmiri, ụdị oasis nwere ọdọ mmiri. Ndị ọkachamara na Feng Shui kwadoro atụmatụ ahụ. Wuru ezi mgbagwoju anya- na 2010 ụlọ ọrụ «Las Vegas Sands».
Kedu ihe kpatara enwere naanị ice ice, ogige ụlọ oriri na nkwari akụ na saịtị ahụ na 2 na ọdọ mmiri ọdọ mmiri n'èzí kachasị na ụwa - ụlọ ọrụ kaadị. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na mmiri dị na bezin mmiri ozuzo. N'ebe a, ị ga-ahụ ebe a na-eme ahụ ike, ụlọ nri, klọb, salons spa, ụlọ ahịa. N’akụkụ ụlọ ahụ, e nwere ebe ngosi ihe mgbe ochie n’ụdị lotus. E nwere ihe ngosi nka, imepụta na teknụzụ dị elu.
Ma n'ezie isi ihe dị mgbagwoju anya, nke eji wuo ihe niile - cha cha.
akụkụ «Marina Bay Nye» nnukwu - 15,000 sq.m. N'ebe a, ndị hụrụ ịgba chaa chaa n'anya nwere ike igwu egwu oghere 2300, ndị tebụl 600 nọchiri anya uche ha maka egwuregwu niile amaara site na kpochapụwo roulette na baccarat na Pai Gow Poker. Kwa ụbọchị enwere ndị ọbịa 25,000.
Mepee cha cha obere obere tupu «Marina Bay Sands», na agwaetiti Sentosa. Enwere otutu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ (ndị na-ese akwụkwọ ya na-echekwa atụmatụ nke mgbagwoju anya) na ntụrụndụ. Ihe kacha ewu ewu bụ Maritime Museum «The Maritime Experience Museum», ogige ntụrụndụ nwere ọtụtụ «Universal Studios Singapore» Amusement, nnukwu akwarium na ogige ụwa, isi iyi dị nsọpụrụ maka nkuzi nke Feng Shui «Lake of Dreams» .
Casino na-enwe obi ụtọ site na olu ya na ọtụtụ egwuregwu enyere. Ihe ngosi cha cha - ihe osise iko di ebube. A na-akwụ ụgwọ ozugbo, a na-enye ndị na-enweghị mmanya na-aba n'anya n'efu.
Maka ndị bi na Singapore nwere iwu siri ike - ha ga-akwụ ihe ruru $ 100 kwa ụbọchị maka ikike ịbịa cha cha. Ma ọ bụ zụta tiketi maka $ 2,000 maka nleta kwa afọ. Ya mere, gọọmentị na-arụsi ọrụ ike na-alụso ndị Gamblers ọgụ - cha cha ọ bụla nwere "ndepụta ojii" nke iji egwuregwu egwu egwu. Ego a na-abanye na mmefu ego nke steeti maka ọrụ ebere.
Maka ndị mba ọzọ iwu dị mfe. Ga-abụrịrị 21 ma weta akwụkwọ ikike ngafe gị. Enwekwara koodu uwe kacha nta - uwe kwesịrị ịdị mma ma ọ bụghị osimiri (na mkpirisi na flip-flops a gaghị ekwe gị).
Mgbe emechara casinos nke dabeere na ala gọọmentị Singapore iji chee echiche nke ọma banyere njedebe ịgba chaa chaa n'ịntanetị. Ego ahụ agbaghị na mba ahụ. Ọ bụrụ na mbụ na oghere vidio, blackjack na roulette nwere ohere n'efu, mana ugbu a ọ bụghị.
Mkparịta ụka nke "iwu ịgba chaa chaa" nke steeti a na-eme na 2014 ma yikarịrị ka mkpebi ahụ ọ ga-abụ nnabata mmechi nke oghere Internetntanetị maka ndị na-ede akwụkwọ na ndị na-egwu egwuregwu mba ofesi. Kemgbe mbido afọ 2015 egbochila ndị ọrụ dị ka IBCBet, SBOBet na MaxBET. Ha niile nọrọ n'okpuru mkpọchi nke ihe dị ka saịtị 100. N'oge egwuregwu akwụkwọ ede iwu na-akwadoghị n'ịntanetị, ị nwere ike ịnweta nhá na ihe ruru 275 000 ma ọ bụ mkpọrọ maka ọnwa 6.
feris wịịl . Adreesị: 30, Raffles Avenue, gbaa gburugburu. Na ya ị ga-achọpụta ọhụụ mara mma nke skyscrapers na Indonesia na Malaysia (ọ bụrụ na enweghị igwe ojii). Ebe kachasị elu - mita 165. Ọ bụ okpu oyi nwere ntụ oyi, okirikiri zuru oke were nkeji iri atọ
Ụlọ ihe nkiri ntụrụndụ Universal . Adreesị: 8 Sentosa Gateway. Ọ bụrụ na ịnya ịnya ụgbọ ala na-amasị gị. Enchanting egosi na fairs - ị ebe a.
Ihe ngosi ihe omuma ihe omuma . Adreesị: 26 Sentosa Gateway, Resorts World Sentosa. Thelọ ihe ngosi nka nwere ihe karịrị 100 eserese na 3D, onye ọ bụla nwere ike ịse foto ma metụ aka aka niile.
Parks “Night Safari” na “River Safari” . Adreesị: Rd Mandai Lake. Ihe dị ka anụmanụ 2500 na anụmanụ puku isii bi na ogige ndị a. Enwere tram nke enwere njem nlegharị anya, nke gara elegharị anya na nnukwu ogige ahụ maka nkeji 6,000.
Clarke Quay . Ọnọdụ: ụzọ ụgbọ oloko - Clarke Quay. Njem njem nlegharị anya jupụtara na ntụrụndụ, isi iyi, ụlọ ahịa na ụlọ mmanya. Ọrụ dị elu, ọ na-abụkarị n'abalị.
Mepee ụlọ ọrụ na 10 nkeji - oke mkpa maka ụlọ ọrụ rgistratsii;
Ogo nri n’obodo na abuo mgbe ososo Japan;
Nke a bụ agba ọsọ abalị "Kachasị 1"
3 Gba chaa chaa na obodo Asia - Singapore
egwuregwu nke ra